MOV Resizer: Olee otú Resize QuickTime MOV Files
> Resource> Video> Olee otú iji Resize MOV (QuickTime) Video Files
Olee otú Resize MOV (QuickTime) Video Files
Ma eleghị anya, ị nwere nza nke MOV faịlụ, dị ka QuickTime fim na igwefoto footages wdg Ebe MOV (QuickTime) file size bụ oke buru ibu, nwere ike ị chọrọ ịgbazigharị faịlụ size iji kwado gị mobile media ngwaọrụ ma ọ bụ chekwaa ọzọ ohere wdg Iji resize MOV videos, ihe ị chọrọ bụ nnọọ ihe magburu onwe MOV resizer maka enyemaka. Ebe a, Wondershare Filmora ukwuu tụrụ aro.
Ọ na-ahapụ gị tọghata n'etiti iche iche na-ewu ewu video formats, nakwa dị ka hazie video kwa ka mkpebi, etiti ọnụego na bit ọnụego wdg Ọ pụtara na ị pụrụ resize MOV ka obere size site n'ịtụgharị ndị ọzọ format na elu mkpakọ ọnụego, ma ọ bụ ẹsụhọde video mkpebi, etiti ọnụego na bit ọnụego. Ugbu a bụ ịmụta ihe ọmụma banyere Filmora na-eso nkuzi resize gị MOV (QuickTime) faịlụ na atọ mfe nzọụkwụ.
Ike MOV (QuickTime) video resizer: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Mfe resize gị MOV video na-enweghị àgwà ọnwụ;
Hazie video mkpebi, bit ọnụego, etiti ọnụego na ndị ọzọ na ntọala gị video;
Kpọmkwem bulite video ka YouTube ma ọ bụ Facebook mgbe edezi a mere;
Akwado OS: Windows (Windows 10 gụnyere) & Mac OS X (n'elu 10.6).
1 Import MOV (QuickTime) faịlụ ka onye ọrụ Album
Mbụ, mbubata gị Obodo MOV faịlụ site ọkụkụ "Import" bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ na-adọkpụpụta MOV faịlụ na ị chọrọ site na kọmputa a ngwa si ọrụ 'album. All dị faịlụ ga-apụta dị thumbnails na ekpe ebi ndụ.
2. ebipụ achọghị MOV (QuickTime) video akụkụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ebipụ ụfọdụ clip (n'ezie, ọ bụ ihe ndị kasị kpọmkwem ụzọ resize MOV faịlụ maka nta size), dị nnọọ karị ịdọrọ na dobe n'elu nke red Time egosi na amalite na ogwugwu ebe ị chọrọ, mgbe ahụ, oge ọ bụla kụrụ "scissor" button ibipu clip.
3. Mee ya mmepụta Ọkpụkpọ na ntọala
Ugbu a, i kwesịrị ịdọrọ otu nke gị chọrọ MOV faịlụ site na album a MOV resizer usoro iheomume. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ime ihe ọ bụla-edezi ọrụ, dị nnọọ kpọmkwem pịa "Mepụta" button, na-aga "Format" taabụ na mmapụta window, na mgbe ahụ họrọ "MOV" dị ka mmepụta usoro. Mara na ọ bụrụ na ị chọrọ resize MOV faịlụ site n'ịtụgharị ndị ọzọ formats na elu mkpakọ ọnụego dị ka FLV, dị họrọ FLV kama.
Na ala nke mmapụta mmepụta window, e nwere a triangle-ọdịdị bọtịnụ. Dị nnọọ pịa ya na-eme ụfọdụ elu ntọala. Ẹsụhọde video mkpebi bụ ụzọ kasị mma resize MOV faịlụ maka nta size. Ọ bụghị obere ezu? I nwekwara ike belata ya video etiti ọnụego na bit ọnụego.
Video nkuzi: Olee otú resize MOV (QuickTime) video
MOV Editor maka Windows 8: Easily dezie gị MOV Videos (QuickTime)
Olee otú Jikọọ / Ikpokọta / jikota MOV (QuickTime) Files na MOV joiner
Olee otú dezie MOV Video Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)